BlueCoin စျေး - အွန်လိုင်း BLU ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BlueCoin (BLU)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BlueCoin (BLU) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BlueCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BLU – BlueCoin
Market ကဦးထုပ်: $106 451.00
volume_24h_usd: $3 292.33
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BlueCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BlueCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlueCoinBLU သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00054BlueCoinBLU သို့ ယူရိုEUR€0.000455BlueCoinBLU သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000411BlueCoinBLU သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000492BlueCoinBLU သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00485BlueCoinBLU သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00339BlueCoinBLU သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.012BlueCoinBLU သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00201BlueCoinBLU သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000718BlueCoinBLU သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000747BlueCoinBLU သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0121BlueCoinBLU သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00419BlueCoinBLU သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00289BlueCoinBLU သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0405BlueCoinBLU သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0911BlueCoinBLU သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000739BlueCoinBLU သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000809BlueCoinBLU သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0168BlueCoinBLU သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00375BlueCoinBLU သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.057BlueCoinBLU သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.64BlueCoinBLU သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.205BlueCoinBLU သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0396BlueCoinBLU သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.015
BlueCoinBLU သို့ BitcoinBTC0.00000005 BlueCoinBLU သို့ EthereumETH0.000001 BlueCoinBLU သို့ LitecoinLTC0.000009 BlueCoinBLU သို့ DigitalCashDASH0.000005 BlueCoinBLU သို့ MoneroXMR0.000006 BlueCoinBLU သို့ NxtNXT0.0383 BlueCoinBLU သို့ Ethereum ClassicETC0.00008 BlueCoinBLU သို့ DogecoinDOGE0.15 BlueCoinBLU သို့ ZCashZEC0.000005 BlueCoinBLU သို့ BitsharesBTS0.0205 BlueCoinBLU သို့ DigiByteDGB0.0197 BlueCoinBLU သို့ RippleXRP0.00175 BlueCoinBLU သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 BlueCoinBLU သို့ PeerCoinPPC0.00187 BlueCoinBLU သို့ CraigsCoinCRAIG0.24 BlueCoinBLU သို့ BitstakeXBS0.0225 BlueCoinBLU သို့ PayCoinXPY0.0092 BlueCoinBLU သို့ ProsperCoinPRC0.0661 BlueCoinBLU သို့ YbCoinYBC0.0000003 BlueCoinBLU သို့ DarkKushDANK0.169 BlueCoinBLU သို့ GiveCoinGIVE1.14 BlueCoinBLU သို့ KoboCoinKOBO0.118 BlueCoinBLU သို့ DarkTokenDT0.000497 BlueCoinBLU သို့ CETUS CoinCETI1.52